Ejiji & ọla nchara nchara edozi etemeete 9 agba chara acha iji kwado Skin dị iche iche na-adịghị egbu egbu na Paraben Free vegan na arụrụala n'efu.
Nke mbu:Anyị ngwe & bronzer palette bụ incredibly mfe iji, na-eme gị etemeete eme a ikuku. Onyunyo nwere ike agwakọta ma kwekọọ iji mepụta ndo gị ịchọrọ. Naanị gbanye ahịhịa gị ka ọ bụrụ otu n'ime ndo anyị na-acha ọkụ ma tinye n'akụkụ akụkụ ihu gị chọrọ. Ọ bụ ya.
Inogide: contour anam-elu palette na ọkachamara profaịlụ ntụ ntụ, ezigbo onye na mfe ngwakọta. Powdery mgbakwasa efere nwere ike belata mmanu mmanu ọdịdị ihu na ọdịdị ihu pụtara cheek ọkpụkpụ. Mee ka etemeete gị zuru oke ruo ogologo oge
Ligha dị ọkụ ma dịkwa mfe ijikọta, Vodisa Contour eyeshadow diski. Ihe ngwe a na-ete na-eme ka ọ dị mfe ijikọ na mkpịsị aka ma ọ bụ brushes, zuru oke matte contour color, kwesịrị ekwesị maka etemeete kwa ụbọchị ma ọ bụ oge pụrụ iche. Kwesịrị ekwesị maka afọ niile na ụdị anụ ahụ.
Abụọ mbụ:Ọ ga-eju gị anya site na usoro dị nro, nke dị nro. Ejiri ya na ihe ndị sitere n'okike iji gbazee ọfụma na akpụkpọ gị. ngwe & bronzer na-agbakwụnye mmetụ zuru oke na-enweghị mmetụta dị arọ ma nwee ike idozi ya maka nsonaazụ pụrụ iche n'ezie.
Nke mbụ:Mma na-enwu mara mma nke palette na-agụnye paịlị 9 nke silky-mụrụmụrụ highlighter sitere na site n'ọchịchịrị ruo n'ọchịchịrị iji dabaa anụ dị iche iche. Enwere ike iji ndo ndị a gosipụta akụkụ dị elu nke ihu maka nkọwapụta na igirigi nke ọma.
Anyị na-agbaso ụkpụrụ anyị bara uru: ịdị ọcha, iche iche, ịdị mfe, na mma. A na-eji ngwaahịa ndị kasị dịrị nchebe emepụta ngwaahịa anyị, na-eme ka ihe ịchọ mma anyị na-adịghị egbu egbu na nke paraben. Anyi bu kwa anumanu enweghi obi ojoo.
Nke mbụ:Matte ọla kọpa, Ọla ọla ntecha, na-egbu maramara, ọ dịghị flash. Nke a matte ntụ ntụ, ọla ntụ ntụ, na ụdị ihe dị iche iche.
Kiss shine, matte bronze shine mfe karịa mgbe ọ bụla! Nke a bụ ihe kachasị mma na Bronzer anyị maka ọdịdị ọkụ, nke na-acha anwụ. Kọwaa ihe ihu gị ga-eji ma jiri ọla kọpa chọọ ihe ịchọ mma maka ebe ihu gị dị.
Iji anyị zuru ezu nke anam-elu ngwaahịa rụchaa gị etemeete, site ime ihiere, ọla, ntọala na concealer ka palette na lipstick, ị ga-eche oké.
Onyinye zuru oke, Grooming Kitroom na-enyere aka mee ka ihu gị dịkwuo mma, na-enweghị ime ka etemeete gị buru ibu ma ọ bụ buru ibu. Zuru oke maka ime kwa ụbọchị.
Nke gara aga: Ihu etemeete-BD-ime ihiere
Osote: Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ-BD-LS-009
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Obere lipstick, Kacha mma ude Eyeshadow, Anya Anya ọla edo, Ihe kacha mma, Shimmer Lipstick, Matte Eyeshadow Palette, Ngwa niile